टिचिङ अस्पतालले गर्‍याे टिबी भएकालाई क्यान्सरको अप्रेसन ! लिबियाको जेलबाट ३ को सफल उद्धार (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
टिचिङ अस्पतालले गर्‍याे टिबी भएकालाई क्यान्सरको अप्रेसन ! लिबियाको जेलबाट ३ को सफल उद्धार (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३५० औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको विशेष एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. क्षयरोग (टिबी) भएका बिरामीलाई क्यान्सर भएको भन्दै अप्रेसन गरियो !
काठमाडौं । काठमाडौ महाराजगञ्ज स्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा क्षयरोगका बिरामीलाई क्यान्सर भएको भन्दै गलत उपचार भएको छ । सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाँउपालिका ३८ वर्षीय रामकुमार बानियाँ बाँया गालामा पिलो भएर टिचिङ अस्पतालमा पुगेका थिए । माघ १६ गते अस्पतालले उनको चेकजाँच सुरु ग¥यो । अस्पतालले माघ २४ गते उनलाई क्यान्सर भएको भन्दै रिपोर्ट दियो । पुनः रिचेक गरी फागुन २ गते पनि क्यान्सर नै भएको भन्दै फाइनल रिपोर्ट आयो । यो दुबै परीक्षण रिपोर्टमा प्याथोलोजिष्ट डा.शोभाना थापाले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
२. प्रहरी कार्यालयमै कुटपिट भएको पनि देख्दैन प्रहरी !
काठमाडौं । प्रहरी कार्यालय भित्रै प्रहरी अधिकारीकै अगाडि ५० वर्षीया चिनीमायां अधिकारी माथि कुटपिट हुदा पनि प्रहरीले निवेदन लिन मानेन । तर प्रहरीले उनीमाथि अन्याय ग¥यो । खासमा चिनीमांयाकी बुहारी भागिरती डांगर नेपाल प्रहरी अस्पतालमा नर्स हुन्, प्रहरीमा उनको पद सइको हो । भागिरतीको आफ्नो श्रीमान प्रदिप प्याकुरेलसँग कुरा नमिलेपछि झगडा सुरु भयो । भागिरती प्रत्येक पटक घरमा आउदा प्रहरी ल्याएर आउने भएपछि परिवारका सदस्यहरुले भिडियो खिचे । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि यो विषय अपराध महाशाखामा पुग्यो । प्रहरी कार्यालय भित्रै चलेको छलफलमा भागिरतीले चिनीमायालाई कुटपिट गरिन् ।
३. लिबियामा बन्दक बनेका खत्री नेपाल आइपुगे
काठमाडौं । लिवियामा बन्दक बनेको दाङका कुलबहादुर खत्री उद्धार भइ नेपाल फर्केका छन् । लिवियामा बन्दक बनेका आफ्नो छोराको उद्धार गरिदिनुस् भन्दै कार्यक्रमको ३३७ आँै श्रृङखलामा हाल कतारमा रहेको दाङका रामबहादुर खत्री लाइभमा गुनासो गरेका थिए ।